अहो यो कस्तो अपराध? नुहाउदै गरेकि युवतीलार्इ यसरी बलात्कार गर्दै भिडियो खिचेर भाइरल गरपेछि… खुल्यो यस्तो रहस्य! – PathivaraOnline
Home > अपराध > अहो यो कस्तो अपराध? नुहाउदै गरेकि युवतीलार्इ यसरी बलात्कार गर्दै भिडियो खिचेर भाइरल गरपेछि… खुल्यो यस्तो रहस्य!
admin October 4, 2018 अपराध 0
एजेन्सी । आफ्नो ब्रतको दिन नदीमा नुहाउन गएकी एक ४५ वर्षीया महिला सामुहिक बलात्कारमा परेकी छन्। सामुहिक बलात्कारको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएसँग भारतभर सनसनी मच्चिएको छ।अहिले बलात्कारका एक आरोपी पक्राउ परेका छन्। एक आरोपित बस चालक हुन्। आरोपितले यस अगाडि पनि निकै महिलामाथि बलात्कार गरेको अरोप छ। पछिल्लो पटक बलात्कृत ती महिलाले डरका कारण बलात्कारको विषय सार्बजनिक नगरेको बताइृएको छ। तर जब भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो तब प्रहरीले तत्काल एक्शन लिएको हो।
भारतको पटनाको एक गाउँमा ग्रामीण प्रहरी चौकीका एसपी आनन्द कुमारले आरोपितलाई पक्राउ गरेर आफ्नै निगरानीमा कारवाही सुरु गराएका छन्। ब्रतको दिन ती महिला नदीमा नुहाई रहेको अवस्थामा एक आरोपित नदी किनारमा आएको र अर्को महिलाको भिडियो खिच्ने आरोपित बिवपुजनले महिलालाई नदीबाट किनारमा ल्याउन भनिरहयो।
दुवैलाई देखेर आत्तिएकी महिला चित्याउन थालिन्। भाई मलाई छोडिदेउ, आज मेरो ब्रत हो गंगा माताको कसम भाई म उपवास पनि बसिराछु। हे गंगा माता बँचाउ। दुई आरोपितले महिलालाई चुप लाग्न धम्की दिईरहे। यसपछि दुवैले नदीबाट निकालेर नदी र किनारमा सामुहिक बलात्कार गरेको प्रहरीलाई उदृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
चर्चित नायिका रेशमाको श्रीमानले नै गो’ली ठो’केर गरे यस्तो विभत्स ह’त्या